စျေးပေါသော Cuplock Ledger ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ။ | Rapid
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးထွားလာသည်
Support ကိုခေါ်ပါ 0086-18800562655
Ringlock ဘုတ်အဖွဲ့ Bracket က
Octagonlock နျ Standard အကြီးစား Duty
Octagonlock ဘုတ်အဖွဲ့ Bracket က
Cuplock ဘုတ်အဖွဲ့ Bracket က
Haky တစ်ခုတည်း Tube Beam
ဂျပန် Frame ငြမ်း
လူမီနီယမ်ကြံ့ခိုင် Hatch-type ကို
Mason ဆို Frame / အဆင့်ဘောင်
ဂုဏ်ပြု & ဆု
အရည်အသွေးမြင့်မားသောအဆင့်မြင့်သံတိုင်တပ်ဆင်ခြင်း Diagona ...
SGS / ANSI / CE အရည်အသွေးမြင့်မားသောအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်း ...
ANSI / AS / SGS / CE အသိအမှတ်ပြု Hot DIP သွပ်ရည်သွင်း Ringlock ...
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Cuplock Ledger ဇာစ်မြစ် - တရုတ် (ပြည်မ) ပစ္စည်း - Q345 မျက်နှာပြင် - HDG - စံသတ်မှတ်ချက် - တောင်းခံချက်တွင်လျှောက်ထားချက် - ဟိုတယ်၊ ဗီလာ၊ တိုက်ခန်း၊ ရုံးအဆောက်အအုံ၊ ဆေးရုံ၊ Schooll, Mall၊ အပန်းဖြေနေရာများ၊ အာမခံချက်များ ...
ထုတ်ကုန်အမည်: Cuplock Ledger
မူလနေရာ: တရုတ် (ပြည်မ)
လျှောက်လွှာ ဟိုတယ်၊ ဗီလာ၊ တိုက်ခန်း၊ ရုံးအဆောက်အအုံ၊ ဆေးရုံ၊ Schooll၊ Mall၊ အပန်းဖြေနေရာများ၊ စူပါမားကတ်
အားသာချက် - ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုအာမခံပေးပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးသည်အချိန်ဇယားကြောင့်ဖြစ်သည်။ Rapid Scaffolding (Engineering) Co. , Ltd. သည် ISO9001 အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ CE, ISO14001, OHSAS18001 ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငြမ်းစနစ်များအားလုံးကို ANSI A10.8, AS / NZS1576.3, Japan standard JIS ကိုအတည်ပြုရန်စစ်ဆေးသည်။
ရှေ့သို့ Cuplock ထောင့်ဖြတ်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်
နောက်တစ်ခု: Cuplock စံ
Rapid Scaffolding သည် Xishan No.3 Construction Industrial Co. , Ltd (无锡市锡山三建实业有限公司) ၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ငန်းသည်ငြမ်းနှင့်ပုံစံပုံစံဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ကန်ထရိုက်စာချုပ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။
၂။ Rapid ငြမ်းကိုဘယ်အချိန်မှာတည်ထောင်ခဲ့တာလဲ။
၃။ Rapid Scaffolding သည်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသနည်း။
Rapid Scaffolding သည် Wuxi တွင်တည်ရှိပြီး၊ ရှန်ဟိုင်းမှမိနစ် ၃၀ အကွာတွင်ရထားဖြင့်လည်းကောင်း၊ တစ်နာရီကားဖြင့်လည်းကောင်းသွားနိုင်သည်။ ရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်းနှင့် ၁၀၀ ကီလိုမီတာလည်းရှိသည်။ လိပ်စာမှာ NO ဖြစ်သည်။ 107 107 အနောက် Xigang လမ်း၊ Xishan ခရိုင်၊ Wuxi City, Jiangsu ပြည်နယ်, တရုတ်။
စတုရန်းမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ အကျယ်အကျယ်ရှိပြီးစတုရန်းမီတာ ၁၅၀၀၀ အကျယ်ရှိသည်
၆။ Rapid Scaffolding ၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမှာအဘယ်နည်း။
25,000T / တစ်နှစ်
၇။ Rapid Scaffolding ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။
သင်သည်အီးမေးလ်ကို sales@rapid-scaffold.com သို့ပေးပို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ် + 86-510-83796833 သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ ကြိုတင်ပေးငွေကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၄၅ ရက်။
10. Rapid ငြမ်းနမူနာပေးနိုင်သလား
ဟုတ်တယ်။ နမူနာဘုံသည်နှင့်သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်။ နမူနာသည်အဆန်းမဟုတ်ဘဲအမျိုးမျိုးရှိပါက၎င်းအားကောက်ခံလိမ့်မည်။
Rapid ငြမ်း ISO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးလက်မှတ်အတည်ပြုခဲ့သည်
12. Rapid Scaffolding သည်ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုတီထွင်ပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ပါသလား။
Rapid Scaffolding သည်အတွေ့အကြုံရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောအင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူသည်။ သင်၏တောင်းဆိုချက်များအရသူတို့သည်ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
HDG, EP, PC နှင့်ဆေးသုတ်။
ပျဉ်ပြား၏ 8%, ပြွန်၏ 6% 3.0-4.0mm, 2.3-3.0mm ၏ 7% ။
EP၊ PC နှင့်ဆေးသုတ်ထားသောပန်းချီကားများကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်သိုလှောင်ရန်အကြံပြုသည်။ HDG ဖြစ်သောပန်းချီကားများအတွက်အထူးလိုအပ်ချက်များမရှိပါ။
အပူဖြင့်နှစ်မြှုပ်ထားသောသွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များ၏သက်တမ်းသည်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ခန့်ဖြစ်သည်။
17. Ringlock နှင့် Octagonlock စနစ်သည်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
ပုံ - Ring disk နှင့် Octagon disk.2) ။ ပစ္စည်း - Octagon disk ကိုအတုလုပ်စဉ်တွင် Ring disk ကိုဖိသည်။ (၃) Wedge - Octagonlock အတုပြုလုပ်စဉ် Ringlock သပ်တုံးကိုဖိထားသည်။ (၄) Spigot - Octagonlock သည်ကော်လာကိုအသုံးပြုသည်။ Ringlock သည် spigot ကိုအသုံးပြုသည်။
Rapid Scaffolding (Engineering) Co. , Ltd. သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်သစ်မာလုပ်ငန်းများတွင် ဦး ဆောင်နေသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ပြီးကတည်းက
ငြမ်းစီမံကိန်း - အနာဂတ်အတွက်
ငြမ်း Standard ပစ္စည်း, ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ရှေးခယျြ ...
အသေးစားသွန်းခြင်း, ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်! ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့် ...
အသေးစားသတ္တုများပုံသွန်း, ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်! ငါတို့ဘာလို့ ...
ငြမ်း၏ sequence ကိုဖျက်သိမ်း